नवरात्रको सातौँ दिन : कसरी गर्ने कालरात्रि देवीको पूजा ? यस्तो छ परम्परा! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नवरात्रको सातौँ दिन : कसरी गर्ने कालरात्रि देवीको पूजा ? यस्तो छ परम्परा!
admin October 23, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
बडादशैंमा नवरात्रको सातौँ दिन । आज कालरात्रि देवीको पूजा गरिँदै । सप्तमी अर्थात् फूलपातीका दिन पूजा गरिने शक्तिस्वरूपा भगवतीलाई कालरात्रि भनिन्छ । कालो घना वर्णकी, गधा वाहन भएकी, तीन आँखा भएकी, चार हात भएकी, उक्त हातहरूमा क्रमशः तरबार, मसाल, वरमा र अभयुर्मा लिएकी देवी कालरात्री हुन्, उनको कपाल झाँक्रो फिँजाए जस्तो देखिन्छ । घाँटीमा बिजुली सरह चम्किने माला छ ।
श्वास फेर्दा पनि कहिलेकाहीँ आगोको राँको निस्केको जस्तो देखिन्छ । माता कालरात्रीको स्वरूप डरलाग्दो जस्तो देखिन्छ तर यिनी भक्तलाई शुभ फल दिने गर्दछिन् । यसैले यी देवीको एक नाम ‘शङ्करी’ पनि रहेको छ । देवी कालरात्रि दुर्जनहरूको उछितो गर्ने हुनुहुन्छ । यी देवीको स्मरण गर्नाले पनि दानव, दैत्य, राक्षस, भूतप्रेत भागेर जान्छन् भनिएको छ ।
देवीले कालरात्रिको रूप लिएर सबै असुर शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको दिनका रूपमा यस दिनलाई लिइन्छ । माता कालरात्रिको आराधनाको समयमा भक्तलाई आफ्नो मनको भानु चक्र अर्थात् शिर मध्यस्थित गर्नुपर्छ । यो आराधानाको फलस्वरुप भानु चक्रको शक्ति जागृत भएर आउँछ । माता कालरात्रिको भक्तिले मनका हर प्रकारका भय नष्ट हुँदै जान्छन् भन्ने मान्यता छ ।
जीवनका हर समस्याको पलभरमा हल गर्ने शक्ति प्राप्त हुने तथा शत्रुको नाश गर्ने माता कालरात्रि आफ्ना भक्तलाई हर परिस्थितिमा विजय दिलाउँछिन् भन्ने विश्वास छ । सप्तमीको दिन माता कालरात्रिलाई गुडको वस्तुको भोग दिइन्छ । त्यसैगरी गरिबलाई दान पनि गरिन्छ । यसो गर्नाले दरिद्रता भाग्छ ।
कृत्यतत्वार्णमा नौ प्रकारका अर्थात फूलपातीको उल्लेख गरिएको छ । रम्भा अर्थात केरा, कच्ची अर्थात कचूर, हलेदो, जयन्ती, बिल्व अर्थात बेल, दाडिम अर्थात् अनार, अशोक अर्थात अशोकको वृक्ष, मानवृक्ष अर्थात अमलताश अथवा मानेकर्कलो, धान्य अर्थात् धान यी नौ पत्रिका मानिएका छन् । यस दिन कालरात्रि देवीका साथसाथै विद्या तथा सङ्गीतकी देवी सरस्वती माताको पनि पूजा गरिन्छ ।
यी ४ महिना’मा जन्मिएका महिला माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् , तपाईको कुन महिना ?
सन्तान अमेरिकामा, हजुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा ! मैले संकल्प गरेकि छु – त्यो घर कहिल्यै फर्किन्नँ !
यी ५ राशिका युवतीहरूले प्रेममा कहिल्यै धोका दिदैनन, जान्नुहाेस्